INetflix ilungiselela amaxabiso amatsha eSpain ngokokuvuza okutsha | Iindaba zeGajethi
Ay Netflix... Iqabane elihle ebusika nasemva kwehlobo. Inkampani yaseNyakatho Melika iyayazi indlela yokuyila ngokutsha kunye nokuyihlaziya ngokupheleleyo indlela esisebenzisa ngayo ukusasaza umxholo we-audiovisual, kangangokuba iyeyona ndawo iphambili kule ndawo, ngaphandle kwento yokuba eSpain isenokuninzi ekufuneka ikwenzile kukhuphiswano yezinye iimpahla ihlawulwe njengeMovistar +.
Nangona kunjalo, into ethile Into ongakhange uqiniseke ngayo yile nto inokwenzeka ukuba iNetflix izakuhlaziya uluhlu lwamaxabiso ayo eSpain, Kwaye iwebhusayithi yabo ibibonisa la maxabiso matsha ngeyure. Nantsi indlela amaxabiso eNetflix amatsha anokubakho ngayo kungekudala.
Iiblogi bezisemlilweni izolo, kubandakanya neForocoches, apho besinokubona abasebenzisi abaninzi bekhalaza ukuba iqonga leNetflix libonelela ngamaxabiso amatsha. Nangona kunjalo, ayibobubi obufikelele nakowuphi na umsebenzisi, kuphela abanye banokujonga oku kunyuka kwamaxabiso, ngelixa abanye iqhubeka nokubonisa ixabiso langaphambili. Okona kubi kuko konke kukuba iNetflix ayiqinisekisanga nangaliphi na ixesha ukuba yimpazamo, ngenxa yoko la maxabiso matsha aya kugqitywa ukwenziwa kungekudala.
Sisoloko sizama izinto ezintsha Netflix kwaye ezi mvavanyo zihlala zahluka ngokwexesha lazo ngokuhamba kwexesha. Kule meko, sivavanya amanqaku amaxabiso ahlukeneyo ukuqonda ngcono ukuba abathengi bayayixabisa njani inkonzo ye Netflix. Asinguye wonke umntu oya kulubona olu vavanyo kwaye ngekhe silunike uluntu ngokubanzi
Amaxabiso amatsha e izicwangciso ezintathu Netflix iya kuba yile ilandelayo:
Netflix Isiseko: € 8,99 (+ € 1)
Netflix Umgangatho: € 11,99 (+ € 2)
Netflix Inkulumbuso: € 13,99 (+ € 2)
Akubonakali ngathi kukude kakhulu ukuba iNetflix ivule ukunyusa amaxabiso, kwaye inyani kukuba ukunyuka akuthethi ilahleko ebonakalayo, nangona kunjalo, inokuthintela ukwanda kwayo eSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » INetflix ilungiselela amaxabiso amatsha eSpain ngokokuvuza okutsha